साबधान , फेसबुकमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबारे जथाभावी लेख्नेलाई पक्राउ गरिदै ? – Todays Nepal
साबधान , फेसबुकमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबारे जथाभावी लेख्नेलाई पक्राउ गरिदै ?
By Todays Nepal | नेपाल आज	 Last updated Jun 12, 2018
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीबारे फेसबुकमा जथाभावी लेख्ने कावासेती १, कोलापानका ३१ बर्षीय जंगे भनिने सुरज भुसाललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उनलार्य सोमबार विहान घरैबाट पक्राउ गरी प्रहरी प्रधान कार्यालय काठमाडौं लगिएको छ । -कान्तिपुरबाट
विद्यार्थी संगठनले अाेलीलार्इ दियाे यस्तो दनक : महँगीको गोली, किन हान्छौँ ओली ? सक्छौ भने… ( पढ्नुहोस् )
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएदेखि सरकार विरुद्ध नाराबाजी गर्दै अाएकाे छ।संगठनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै ‘महँगीको गोली, किन हान्छौ ओली?’ लेखेको प्ले कार्ड बोकेर विरोध प्रदर्शन गरेको छ।
नेविसंघका सभापति नैनसिंह महरको समूहले विश्वभाषा क्याम्पसबाट निकालेको विरोध र्‍याली पुतलीसडक, बागबजार हुँदै प्रदर्शनीमार्गमा आएर कोणसभामा परिणत भएको थियो। कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै नेविसंघका नेताहरुले समृद्धिको नारा दिने ओली सरकारले पटकपटक मूल्यवृद्धिको भार थोपरिरहेको बताए। मूल्यवृद्धिको आन्दोलन पहिलो चरणको भएको बताउँदै विद्यार्थी नेताहरुले आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याएरै छाड्ने बताए।
यसअघि शनिबार साँझ नेविसंघका महामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेको समूहले पनि इन्धनको मूल्यवृद्धिको विरोधमा राजधानीमा मसाल जुलुस निकालेको थियो। ओली सरकार बनिसकेपछि पेट्रोल, डिजल र मट्टितेलको मूल्य ५ पटक बढिसकेको छ।
भाग्यमानी व्यक्तिको हातमा मात्रै हुन्छ यस्तो चिह्न
गृहमन्त्री थापा पछी अर्का मन्त्री चम्मकीय मन्छेहरु भागा भाग ३ गोदाम सिल्बन्दी